३४ कर्मचारीले त्यागे विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति » खबरहरुको एउटै केन्द्र
३४ कर्मचारीले त्यागे विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति
शनिबार, चैत्र १९, २०७३ ०८:११ मा प्रकाशित !
१९ चैत, काठमाडौंँ । विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका ३४ कर्मचारीले त्यस्तो अनुमति त्याग गरेका छन । निजामती सेवा ऐन संशोधनपछि डीभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएको घोषणा गरेका ७३ मध्ये ३४ कर्मचारीले स्थायी बसोबासको अनुमति त्याग गरेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेस गरेका छन ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संशोधनले विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका नागरिकलाई स्थायी बसोबास अनुमति त्याग गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको १५ दिनभित्र अनुमति त्याग वा राजीनामाको विकल्पमा निर्णय नलिए सम्बन्धित कर्मचारी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा थियो । मन्त्रालयले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेको विवरणअनुुसार ऐन जारीपछि डीभी, पीआर तथा ग्रिनकार्ड भएको घोषणा ७३ कर्मचारीले गरेका थिए । यसमा निजामति सेवा, सुरक्षा सेवाका समेत कर्मचारी थिए ।
घोषणा गरेकामध्ये डीभी, पीआर तथा ग्रिनकार्ड त्यागिसकेका जानकारी ३४ जनाले मन्त्रालयलाई दिएका छन । त्याग गर्न चाहेको जानकारी ६ कर्मचारीले मन्त्रालयलाई दिएका थिए, तर, त्याग गरिसकेको विवरण भने प्राप्त नभएको जानकारी मन्त्रालयले समितिमा दिएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: गाडी दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु , ५ जना घाइते
NEXT POST Next post: संसदीय समितिद्वारा अवैध नाका बन्द गर्न सुझाव
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, चैत्र १९, २०७३ ०८:११
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, चैत्र १९, २०७३ ०८:११
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, चैत्र १९, २०७३ ०८:११
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, चैत्र १९, २०७३ ०८:११
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, चैत्र १९, २०७३ ०८:११